အမြင်သဘောထား | Shan Herald Agency for News [Burmese] | Page 3
Posted By: SHANon: August 28, 2016 In: အမြင်သဘောထား
Audio File ကိုအောက်ပါလင့်တွင် နားဆင်နိုင်ပါသည်။ http://vansangva.com/category/audio/ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ ရဲ့မြေပုံကိုကြည့်ရင် လှတာကတော့မပြော နဲ့ ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ မှမတူဘူး။ တမူထူးခြားစွာကို လှ...	Read more
ကိုအောင်ဆန်းရဲ့ ပင်လုံ စိတ်ဓါတ် နဲ့ တောင်ပေါ်သားတို့ ရဲ့ ပင်လုံကတိကဝတ်
Posted By: SHANon: August 27, 2016 In: အမြင်သဘောထား
အညာသားလေး ကိုအောင်ဆန်းထူထောင်ခဲ့တဲ့ ပင်လုံပြည်ထောင်စု ရဲ့ အခြေခံအုပ်မြစ် ကို ရဲရဲ ဖွင့်လှစ်ပြီး ကြည့်ကြရအောင်…. ပင်လုံ ရယ်…. ဒီမိုကရေစီရယ် ….ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ရယ်….ငြိမ်းချမ်းရေး ရယ် ….. ဒီ...	Read more
ပင်လုံစာချုပ် နှင့်ပင်လုံစိတ်ဓါတ်အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေးအမြင် အား ဝေဖန် ဆန်းစစ် ခြင်း
Posted By: SHANon: August 17, 2016 In: အမြင်သဘောထား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အလိုအရ “ပင်လုံ စာချုပ်” သည် အဓိကမကျ။ “ပင်လုံ စိတ်ဓာတ်” သည် သာလျင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ကိုထူထောင် ရန် နှင့် ၁၉၄ဂ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှ ထံမှ လွတ်လပ် ရေး ကို အရယူ ပေးန...	Read more
(၂၁) ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ဖြစ်ထွန်းရေး
Posted By: SHANon: May 12, 2016 In: အမြင်သဘောထား
ဒီတပတ် မြန်မာ့မျက်မှောက်ရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာ NLD အစိုးရအနေနဲ့ (၂၁) ရာစု ပင်လုံညီလာခံတရပ်ကို လပိုင်းအတွင်း ခေါ်ယူ မယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ် ။ တိုင်းရင်းသားတွေ အပါအဝင် ပြည်သူ တရပ်လုံး...	Read more
သျှမ်းနှင့် ကချင် သွေးချင်းညီနောင်များ အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမဲသုတ်ခွပ်ခိုင်းခံ ရမှု သင်ခန်းစာယူတတ်ဖို့လို (ကေအိုင်အို ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လ ၏ မိန့်ခွန်း )
Posted By: SHANon: May 03, 2016 In: အမြင်သဘောထား
ကေအိုင်အို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ မိုင်ဂျာယန် တွင် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့က ဌာနေတိုင်းရင်းသားများတွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပွဲတရပ်ကျင်းပရာ KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ ဗဟိုကော်မ...	Read more
တိုက်ပွဲသာ ဖြစ်နေရင်တော့ မဲဆန္ဒသွားပေးဖို့လည်း မိဘပြည်သူတွေ စိတ်ဝင်စားတော့ မှာ မဟုတ်ဘူး (အမြင်သဘောထား)
Posted By: yawdlaoon: October 23, 2015 In: အမြင်သဘောထား
သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အခြေစိုက်လှုပ်ရှားရာ သျှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း ကျေးသီး မိုင်းနောင် မိုင်းရှူးမြို့နယ်အတွင်း အစိုးရ တပ်မတော် က ထိုးစစ်ဆင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုက...	Read more
တော်လှန်ရေး နေ့က မှတ်ဖွယ် မှတ်ရာ ဗိုလ်ချုပ် စိုင်းယီရဲ့ ပြောစကား
Posted By: yawdlaoon: May 27, 2015 In: အမြင်သဘောထား
သျှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကောင်စီ သျှမ်းပြည် တပ်မတော်မှ လွယ် တိုင်း လျန်းဌာန ချုပ်တွင် ကျင်းပသော ၅၇ နှစ်မြောက် သျှမ်းပြည် အမျိုးသားေ တာ်လှန်ရေး နေ့တွင် သျှမ်း အမျိုးသားများ အဘက်ဘက်မှ စို...	Read more